SheekooyinHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Daashoow Wuxuu ifka kusoo biiray iyada oo ay colaadi jirto. Aabihii Dooyoow wuxuu ahaa nin geesi, garyaqaan, gabyaa, aftahan, howlkar ah. dooyoow wuxuu beeshu u ahaa ninka ugu howlkarsan oo ugu shaqo badan taas waxeey dhaxalsiisay inuu noqdo ninka ugu xoolo badan gaar ahaan Geela oo Kun Halaad kor u dhaafayay. dhalasha daashoow waxey reerka u horseeday Waa cusub oo barwaaqo...
Waxaa jiray nin salaadaha masaajidka ku ilaalin jiray oo lagu yaqaanay masjidka, ninkii ayaa xanunsaday markii masjidkii laga waayey ayaa nin sheekh ah oo masjidka isku yaqaaneen ayaa Damcay inuu soo booqdo markuu tagay ayuu arkay ninkii oo sakaraad ah. Markaasuu sheekhu ku yiri:- Towxiidka qabso wuxuu ku jawaabay:- Sheekhoow aniga iyo kalimadda aad sheegayso waa nala...
Nin Ummadihii Hore ka mid ah oo uu ku sugan yahay Boqortooyadiisii ayaa Fakarey, wuxuuna gartay inuu Boqortooyada ka Dhammaanaayo, waxa uu ku Dhex jirana uu ka Mashquuliyey Cibaadada Rabbigiis, markaas buu Habeen Habeenada ka mid ah ka Dhuuntay Qasriga, wuxuuna ku Waabariistay Boqortooyo kale, wuxuuna Tagey Xeebta, wuxuuna Mushqaayad ku samayn jirey Labanka (Bulukeetiga),...
Waddo Laami ah ayaa la Dhisaayey. Waxay ku soo Beegantay Qabuuro Qadiim ah oo Qofkii ugu Dambeeyey Soddon Sano ka hor lagu Xabaalay. Culimadu waxay Fatwoodeen in Qabuuraha meel kale loo Wareejiyo. Ka dib waxaa la Magacaabay Guddi isugu jira Culimo, Dowladda hoose iyo Odayaashii Deegankaو si ay Howshaas u Fuliyaan. Mayd kasta markii la soo Faago waxaa loo Wareejinayaa...
Ashraf isagoo 10jir ah ayaa la geeyey Dalka Mareykanka, Ashraf Aabihii wuxuu isaguna Wadanka Maraykanka soo galay Sanadkii 1985kii, wuxuuna muddo dheer ku Sharci La’aa Maraykanka ka hor inta aanu Sharciga helin, Ashraf Aabihii wuxuu Gaari Gacan Cuntada Deg-dega ah lagu Gado ku haystay Magaalada New York, Dhaqaale fiican ayaa kasoo gala, Dadaal dheer uu galay ka dib...
Imaam Tujiyo Masaajid weyn oo ku yaalo dalka Suuriya ayaa wuxuu jameecadiisa u sheegay Shan sano ka hor Qiso Cajiib ah oo ku Dhacday. Imamka ayaa sheegay in Habeen Habeenada ka mid ah uu Riyo ku arkay Nabiga CSW, isagoo u sheegay inuu Ninka Deriskiisa ah u Sheego inuu isaga Nabiga CSW uu Jannada Deris kula noqon doono. Subaxdii markii la tukaday ayuu Imamkii u tagay ninkii...
Odey Duq ah ayaa wuxuu la Noolaay Wiilkiisa iyo Gabar uu sodog u yahay iyo Cunug yar oo 4 jir ah uu Awoowe u ahaa. Odeyga waxuu ahaa Nin Da’diiso ay aad u Weyneed, Gacmahiisana way jareenaayeen, Araga Indhahiisaa aad bey u Liiteen. Tilaabadana way dhibeesey, Markuu Cuntada cunaayana ama uu Cabaayo biyaha, inta badan waxuu ku daadin jirey Miiska cuntada lagu cuno, awooda...
Wiil ayaa dhigan jiray jaamacad. Aabihiina wuxuu ahaa nin maal qabeen ah, wiilka wuxuu aad u jeclaa gawaarida cayaaraha (sports cars) wuxuuna ku taami jiray inuu helo gaari noocaas ah, kadib markii uu dhameeyay jaamacadii ayuu aabihii ka codsaday inuu helo hadiyad balse muusan sheegin waxa uu doonayo. Aabihii oo ogaa waxa uu jecel yahay wiilkiisa ayaa maa lintii danbe...
Qisadani waxay ku dhacdey gabar dhigan jirtey kulliyada shareecada ee jaamacad ku taalla mid ka mid ah dawladaha Khaliijka, gabadhani waxay lahayd cod aad u qurux badan isla markaana waxay akhrin jirtey habeen kasta qur’aanka kariimka. Hooyadeed habeen kasta marka ay sii seexaneyso waxay is taagi jirtey albaabka qolka hortiisa waxayna dhageysan jirtey oo maqli jirtey...
Insaanka 4 cadow ayuu leeyahay. Waa naf, waa hawo, waa sheeydaan waa aduunyo. Afartaas sheey waxay cadoow ku yihiin insaanka. Maanta waxaan wax yar iska xasuusineeynaa xeelada uu isticmaalo sheeydaanka. Sheeydaanka awood malaha laakiin labo sheey ayuu isticmaalaa koow inuu dhagta wax kugu sheego oo kuu qurxiyo ayuu yaqaanaa laakiin dhagar ayuu yaqaanaa ama xeel ad uu dadka...
Gabar ayaa waxay ku Riyootay Nin ay Qaraabo yihiin oo Abeeso Cuntay, Aroortii ayay Gurigiisa Tagtay weyna u Sheegtay. Ninkii wuu Naxay wuxuuna yiri:- Neef ayaan Qalayaa Sadaqo ahaan. Neefkii wuu Qalay Deriska oo dhan ayuu u Qeybiyay. Waslad ayaa u soo Hartay markuu Damcay inuu Cuno ayuu Xasuustay Islaan Waayeel oo Deriska ah oo uu iloobay, Wasladii ayuu ula Cararay, wuu...
Boqor ayaa maalin soo iibsaday labo nin oo addoomo ah, mid ayaa aad u qurux badnaa midka kalena wuu fool xumaa. Kadib markii ay qasrigiisa yimaadeen ayuu kii quruxda badnaa u diray qubays. Intuu ku maqnaa ayuu ku jeestay kii foosha xumaa, kuna yiri: saaxiibkaa wuxuu ii sheegay inaad nin xun oo tuug ah tahay ee ma runbaa? Adoonkii ayaa ku jawaabay: Boqorow, ninkaa saaxiibkay...
Waxaa la yiri qarnigii koowaad ee Hijriyada ayaa waxaa jiray wiil dhallinyaro ah oo Ilaah ka cabsi badnaa cilmigana aad u raacan jiray hawlo oo dhanna faraha uga qaaday sidii uu cilmi diineed u korodhsan lahaa. hasee yeeshee wiilkaasi faqiir ayuu ahaa, waxaa haddaba dhacday inuu maalin aad u gaajooday oo markii uu gaajadii xamili waayay a yuu gurigiisii iskaga baxay isagoo...
Sheekh Maxamed Xasaan oo kamid ah culumada waa weyn ee caanka ka ah dunida ayaa qisadan yaabka leh ku soo gudbiyay Barnaamijkiisa ka baxa Telefishinka Al-raxma. Sheekh Maxamed waxa uu u dhashay wadanka Masar, waxa uuna kamid yahay culumada wadankaasi ugu waa weyn ee caanka ka ah, isla markaana dunidana si weyn looga yaqaanno. Qisadan ayaa u dhacday sida uu Sheekhu sheegay...
Qisadan layaabka badan waxa ay ku bilaabatay markii nin guur doon ah oo u dhashay wadanka Sacuudiga uu Guur ka dalbay Gabar Mucalimad ka ah iskuul ku yaala Magaalda Dhaaif, Gabadhii ayaa inay guursato Shardi uga dhigtay inuu la guursado laba gabdhood oo kale oo saaxiibadeed ah Macalimiina ay ka wada yihiin iskuulka ay wax ka dhigto. Arintaas ayaa aad uga yaabisay dadkii...
Dadka qaar waxey meelaha bulshadu ku kala war qataan dadka uga faaideyaan wacyi galinta iyo is xasuusinta maalinta qiyaamo. hadaba waxaan soo gudbin donaa qiso yaab leh oo ey page ka eey facebook kulee dahay aisha mohamed ku soo ban dhigtay ka faa ideysi wacan Saclabata ibnu cabdirahman waxaa uu ahaa nin nabiga aad u jecel una shaqeeya . waxaanu aad u dhegaysan jiray xadiiska...
Saxaabigii lagu magacaabi jiray Xaadib Ibnu Abii Baltaca waxa uu ahaa saxaabi aan u dhalan quraysh marka Nabiga iyo saxaabadiina waxa ay usoo hijroodeen Madiina, Xaadib reerkiisii iyo maalkiisii waxa uu uga soo tagay MAKKAH …. Xaadib waxa uu is dhahay quraysh umaadan dhalan reerkaagii iyo maalkaagiina wax kuu ilaalinaya malaha ragan aad la soo hijrootay waa rag u dhashay...
Qisadani waa sheeko dhab ah oo Jacayl xanuun badan xambaarsan. Sheekadanina waxa ay ku dhacday wariyaashii sanadadii todobaatanadkii ilaa sideetanadakii kuwii ugu caansanana mid ka mid ah barigaa kaasoo loo yaqaan Abdala Nuuradin Alaha u Naxariistee. Waxanu sida la ogyahayba uu ahaa nin wariye ah oo aad u cod macaan, islamarkaana ah hal abuure. Waxa heesaha uu alifay badankooda...